Ny vaovao n'ny alarobia 20 mey 2009
2009-05-20 @ 21:31 in Politika
Nisy fiovana kely ny fandaharan'ny radio fahazavana eto Antananarivo. Iray amin'izany ny nanjary nametrahana vaovao tselatra isan'ora ao amin'ity radio ity amin'ny maraina sy ny atoandro. Ny fiovana faharoa : Voatery naroso atsasak'adiny mialoha hatrany ny antso sy filazana ary fampandrenesana ao amin'ity fampielezam-peo ity. Mihabetsaka tahaka izany ihany koa ny dokambarotra azony. Nahoana no nihabetsaka ireny karazana fampilazana ireny? Mieritreritreritra ny mpandefa ireny fampilazana ireny fa mihabetsaka ny mpihaino ity radio ity. Mazava loatra moa fa ny filazana avy amin'ny fiangonana no maro an'isa aloha! Ny hira ao anefa dia niverina ho hira evanjelika avokoa, ka na hiran'ny mpihira tsotra aza dia hiram-bavaka no mandeha... androm-pisaonana sa androm-pifohazana?
Eo ihany koa ny antony hafa fa ny radio fahazavana irery no fampielezam-peo mandefa ny ampahany betsaka ny vaovaon'ny hetsika ataon'ny mpanohana ny ara-dalàna eny amin'ny Auditorium Ankorondrano, sy mahasahy milaza ny vaovao ampitain'ny any ivelany ka mifanohitra amin'izay ambaran'ny mpitondra ao amin'ny FAT, ohatra amin'izany ny filazan'ny PHAT fa "tsy iadian-kevitra ny maha-mpitondra tetezamita ahy", teny mampidi-droa tahaka ny te-hilaza ry zareo hoe manaiky ny fijoroan'ny tetezamita ny tany Lybia, nefa afaka ilazana ihany koa hoe tsy nety niady hevitra amin'ny resaka tetezamita ny filoha Lybiana Kaddhafi. Fa avy eo moa dia nilaza izy fa manaiky ny fijoroany ny filohan'ny Firaisam-be Afrikana ka ho avy amin'izay ny manaraka. Manambara ny vaovaon'ny hetsika ihany ny radio hafa saingy miserana ihany izany, fa tsy misy kosa ny mahasahy milaza ny vaovao mifanohitra amin'izay ambaran'ny FAT ankoatra ny radio fahazavana araka ny nambarako teo. Ny gazety taratra ihany koa no hita mametraka fampisalasalana amin'izay ambaran'ny FAT ka mametraka mazava ny loharanom-baovaony avy any ivelany.
Ny momba an'i Evariste Ramanatsoavina
Eo amin'ny resaka fanaovan-gazety ihany isika dia hitafa kely ny momba an'Atoa Evariste Ramanantsoavina, mpanao gazetin'i Radio Mada izay nosamborina sy nogadraina isika. Ny alarobia 20 mey no nivoaka teo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany etsy Anosy ny didim-pitsarana mikasika ity mpanao gazety ity. Amin'ny fiampangana dimy nanenjehana azy dia afaka noho ny fisalasalana izy amin'ny fanenjehana efatra fa eo amin'ny fiampangana fa nanely vaovao tsy marina izy no voasazy handoa onitra Ar1.000.000. Tsy afa-po amin'io didim-pitsarana io moa ny mpisolovavan'Atoa Evariste Ramanantsoavina ka milaza hampakatra fitsarana ambony. Na izany na tsy izany dia nitondra teny fisaorana an'Andriamanitra nandahatra ny zavatra rehetra, Atoa Evariste, misaotra ny vady aman-janany sy nyfianakaviana niray hina, nisaotra ny vahoaka rehetra, ireo izay nitondra am-bavaka, ary indrindra indrindra ireo namana mpanao gazety izay henony ny akony ary tsy mbola nisy tahaka izany ny fahenoana azy ary maniry ny hitohizan'ny firaisan-kinan'ny mpanao gazety ny lehilahy.
Nanambara ihany koa Atoa Evariste Ramanantsoavina fa hiteny ary mbola hiteny foana, izay no asany ary izay no hamelomany vady aman-janaka : ny asa fanaovan-gazety, izay no asany ary tsy manana fidiram-bola ankoatra izay ary tsy maintsy hiteny foana. Ny fitantarana ny zavamisy ny zavatra rehetra (niainany) dia aleo mba hotantarain'ny mpanao gazety Evariste Ramanantsoavina, mba ho "exclusivité" ho azy satria mpanao gazety izy, afaka manoratra ny zavatra niainany rehetra. Tahatahaka izay ny antso nataony tao amin'ny radio fahazavana.
Resaka mana Tiko Toamasina terena hamokatra
Namaly tsy nanonona anarana ny fanendrikendrehana nataona radio hafa iray ihany koa ny radio fahazavana, na tsy nolazainy aza ny mpanao gazety avy amin'io radio io dia fantampantatry ny mpihaino ihany ny nihavian'ny feo fanendrikendrehana, hosoram-potaka ho manonontonona anarana mpanao gazety indray ny radio fahazavana. Endrikendrika izay tsy henoko mihitsy ihany koa satria tsy miala eo amin'io fantsona io ny fampielezam-peo henoiko. Resaka Mana Tiko no tena niatombohan'ny disadisa raha ny filazan'ny radio fahazavana azy. Nanao fanambarana manko ny vondrona tiko ka toy izao manaraka izao izany fanambarana izany:
Manoloana ny zava-misy ankehitriny miseho ao amin'ny orinasa ny mana tiko Toamasina izay mpamokatra lafarinina dia manao izao fanambarana izao ny tompon'andraikitra. Tsy misy ny fifanarahana tamin'ny tompon'andraikitra tato amin'ny tiko ny amin'ny fanodinana ny ozinina Mana, izay araka ny lalàna misy dia mbola fananan'ny orinasa tiko tanteraka. Noho izany dia tsy tompon'andraikitra ny ao amin'ny tiko ny amin'ny zavatra rehetra mety hitranga amin'ny fampihodinana an-keriny ny ozinina. Melohina tanteraka ny fandrobana sy ny fanimbana ny orinasa tiko mana, ka hoenjehinay araka ny lalàna velona ireo mpanome sy mpanatanteraka izany. Avy amin'nympitantana ny vondrona tiko. Androany alarobia 20 mey 2009.
Nanambara ihany koa ny ao amin'ny radio fahazavana fa fantatry ry zareo ny angom-baovao rehetra natao fa mitentina hatrany amin'ny Ar50
000 no amoahana sy ivarotana ny iray gony omena ny trésor. Rehefa tonga any amin'ny mpanjifa anefa izany dia amidin'ny FAT hatrany amin'ny Ar76 000 ny iray gony, izanyhoe tsy mitovy ny fanambarana atao. Fangalarana sy fakana vola mihoampampana izany satria mahatratra Ar26 000 isaky ny gony no alaina. Tsy azo atoka ihany koa anefa etsy andanin'izany ny kalitaon'ny vokatra mivoaka avy eo fa mety hiteraka olana ara-pahasalamana toy izay nitranga tamin'ny menaka tsy voadio ara-dalàna herinandro maromaro lasa izay ny vokatra mivoaka avy ao.
Ny vaovaon'ny tolona eny Ankorondrano
Hiditra amin'ny vaovaon'ny tolona indray isika. Voalohany amin'izany dia hanao fotoam-pivavahana lehibe any amin'ny Auditorium Ankorondrano ny mpanao fihetsiketsehana ny andron'ny alakamisy 21 mey 2009 fahatsiarovana ny andro niakarana, ny andron'ny Zoma 22 mey 2009 kosa dia manentana ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna ny mpitarika ao amin'izy ireo hanokana ity andro ity ho andro fifadian-kanina ka ny olona raisina ho ohatra amin'izany dia i Estera vehivavy voasoratra ao amin'ny Testamenta Voalohany hiresaka amin'ny Emperora (Ahasoerosy).
Andro vitsivitsy izay dia manahirana ny firesak'i Satrobory miomana hirotsaka hofidiana ho Ben'ny tanànan'Antananarivo. Tamin'ny voalohany dia nataon'ny mpanatrika ho fihomehezana ankolaka ny firesak'ity mpitari-tolona iray ity, nefa raha mitohy elaela izay dia hampihena ny faharisihan'ny mpitolona ihany amin'ny farany. Tsy ho ela ihany koa ny fanesoesoan'ny mpiady hevitra amin'ny tena amin'io kabary mahatsikaiky ataony io ka aleo tenenina mora ihany ny namana. Tahaka izay mahasosotra ahy amin'ny fanandrata-tena matetika ataon'i Tonton Ambroise ihany koa, dia tsara raha samy mampangina izay nofinofy ririnina amin'izay fikasana hirotsaka amin'ny fotoam-pifidinana any anatiny any izay rehetra mitari-tolona fa manimba ny tolona ny filazalazana ny izaho ho izatsy na izaho ho izary. Endrika fanasaritahana sy familiviliana ny tolona avy hatrany manko ireny amiko. Eny, mety ho izay no antony mampazoto azy ireo hanao ny tolona nefa na dia izany aza!
Aorian'iny volana imaso tsy mba kilema iny dia ireto kosa ny vaovao hafa manaraka: Milaza ny solontenan'ny MFM Analamanga fa na mamela na tsy mamela ny mpitolona eo Ambohijatovo ny FAT dia izy hatrany no voa. Mamela izy dia hitan'ny izao tontolo izao ireo mpitaky ny hamerenana ny ara-dalàna sy mandà fanonganam-panjakana. Tsy mamela ny hankanesana eo Ambohijatovo izy dia asehony amin'izao tontolo izao fa tsy manaja ny demaokrasia akory ny olona milaza fa demaokraty. Fa ny kianjan'ny demaokrasia avy tsy hamelany ny olona haneho ny heviny. Manaraka izany, raha milaza ny FAT fa tsy miresaka politika fa fampandrosoana, tsy ny famerenana ny gasy ho voazanaka na hilahatra vary sy menaka no fampandrosoana.
Ny vaovao hafa dia mbola mitady hisisika ny amin'ny tsy hamelana ny filoha Ravalomanana hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena ihany ny solontenan'ny Firenena Mikambana eto Madagasikara. Efa nifanome toromarika ny amin'ny hialana amin'izany dinika izany moa ny mpiara-mitolona fa lasa namonjy kosa indray ny teny amin'ny HotelPanorama izay karakarain'ny fiaraha-monim-pirenena Malagasy, izany hoe fifanarahana eo amin'ny samy Malagasy. Mitady olona maro hifampidinika ao izy fa ny ao amin'ny HAT sy ny tariky ny filoha Ravalomanana ihany no mifampiresaka. Mbola nametraka ny fepetra famotsorana ireo nosamborina sy fiantohana ny fitandroana ny ain'ny filoha Ravalomanana ny mpanohana ny ara-dalàna hampizotra ny fifanarahana. Farany, mitady adihevitra mivantana ao amin'ny televizionam-panjakana samy mitondra ny atontan-taratasiny sy ny porofony ny roa tonta ny amin'ny maha-ara-dalàna ny fitondrana na ny amin'ny maha-fanonganam-panjakana azy. Anjaran'ny olona ny mandray izay tokony horaisiny sy mitsara. Dia aseho avokoa ny vaovao rehetra mitranga na aiza na aiza.
Jentilisa, alarobia 20 mey 2009 amin'ny 23:32